07/04/2018 - Page 2 sur 4 -
Startup Weekend : Tetikasa maro hofantenana any Fianarantsoa
Taorian’ny andiany teto Antananarivo sy tany Paris, Frantsa, ny taona 2017, hiroso amin’ny andiany voalohany amin’ny fifaninanana famoronana tetikasa any Fianarantsoa ny Startup Weekend. Hotanterahina ny 25 hatramin’ny 27 mey izao izany. Raha ny fanazavan’ny …Tohiny
Lisea Arivonimamo : Mpianatra 24 sempotry ny vovoka fotsifotsy
Tovovavy miisa 22 sy tovolahy 02, mpianatra ao amin’ny kilasy famaranana ao amin’ny lisea Arivonimamo no voatery naiditra hopitaly omaly maraina, noho ny fahasemporana nateraky ny vovoka fotsifotsy tao an-toerana. Araka ny voalaza, dia vao …Tohiny
Trafikana volamena : Mpivady namoahana didy fampisamborana
Tao amin’ny efitrano fahaefatra no nohainoana ny fiaiken-keloka I Mohamed Houssen Nathalie sy Samuelien, izay tsy natrehan’izy ireo mivantana izany. Omaly araka izany no andro voatondro hanatanterahana ny fitsarana ireo olona roa ireo teo anatrehan’ny …Tohiny
Beraketa : Mpianatra 12 taona maty notifirin’ny dahalo
Ankizy 12 taona, mpianatra ao amin’ny EPP Beraketa, distrikan’I Bekily no namoy ny ainy vokatry ny hetraketraky ny dahalo ny alin’ny alarobia lasa teo. Araka ny loharanom-baovao, dia tonga nanafika tao amin’ny tokantrano nisy an’ity …Tohiny
Feno telo ambin’ny folo andro anio no nitazoman’ireo jiolahy an’I Akyl Cassam Chenai, izay tsy mbola nandrenesam-baovao hatramin’izao. Ho fankasitrahana sy ho famporisihana ny olon-drehetra tsy ankanavaka, hiara-hiasa hatrany amin’ireo mpitandro ny filaminana ao Toamasina, ...Tohiny